Vaovao - Inona ny tsena telo lehibe an'ny vokatra karbida tungsten?
Inona ny tsena telo lehibe an'ny vokatra karbida tungsten?
Inona ny tsena telo lehibe an'ny vokatra karbida tungsten ankehitriny? Ny ampahany matevina dia mitazona ny tsenan'ny fiara, fitsaboana, angovo vaovao, mino izany ve ianao? Fantatrao ve izany? Azafady avelao aho hampahafantatra azy anao anio.
Ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny fiara. Aorian'ny famolavolana, ny fandrefesana, ny vy na ny vovo-drongony ary ny dingana hafa hamokarana faritra karbida simenitra ampiasaina amin'ny orinasa samihafa. Taorian'ny fampandrosoana 70 taona, ny faritra karbida simenitra dia novolavolaina tsikelikely avy amin'ny fanoloana ny vy vy miaraka amin'ny tanjaka ambany sy ny fananana somary tsotra mba hahafahana manolo ny fanariana sy ny forging faritra amin'ny faritra matanjaka avo lenta ary lasa mpandaitra mahomby amin'ny milina na casting faritra.
Ny indostria any ambanin'ny karbaona simenitra dia mety ho lasa faritra fiara, faritra moto, faritra misy compressor ary kojakoja hafa, avy amin'ny fomba fijerin'ny indostrian'ny milina karbida vita amin'ny simenitra manerantany, ny tsena lehibe indrindra amin'ny varotra vokatra tungsten karbida dia ny indostrian'ny fiara, ny teknolojia karbida vita amin'ny simenitra faritra, ny kalitao avo indrindra takiana amin'ny tsena.
Endmill Carbide Cemented, Carbide simenitra, Fitaovana karbida, Mills farany Carbide End, Milling Cutter, Fitaovana fanapahana karbaona,